Indlela yokusesha amasu okuthengisa ama-Amazon angcono kakhulu?
Wonke umuntu othengisa kuleyo ndawo emakethe egcwele indawo kufanele azi ukuthi angasesha kanjani imikhiqizo ye-Amazon edayisa phambili, amacebo, kanye nokuqapha amanani nokugcina amanye amacebo ahlakaniphile ngenqubo eqinisekisiwe. Kodwa ungathola kanjani amathuba afanele futhi ubone imikhuba engcono kakhulu yabamncintiswaneni bakho ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi nomzamo? Njengoba sekukhona okuningi okuzokwenzela wena nezinto eziningi kangaka ukuze ukwandise ngokuhlunga kwemikhiqizo yakho kanye necebo lokubiza. Ngenhlanhla, akukho ukushoda kwamathuluzi e-intanethi nesofthiwe yokusesha ama-Amazon atholakalayo kakhulu okuthengiswayo - kusukela ekuhloleni komkhiqizo, inqubomgomo yamanani, imigomo yokuthunyelwa, kumakhasimende, ukucwaninga ngegama elingukhiye, kanye nezindlela ezinhle kakhulu zokuphakanyiswa komkhiqizo ofanelwe phezulu abathengisi abaphumelelayo be-ecommerce. Njengoba ngishilo, kunezinkulungwane ezingamakhulu eziyisikhombisa abasizi be-inthanethi abatholakalayo ekufinyeleleni okuvulekile. Kodwa ngezansi ngizokukhombisa amathuluzi ami amathathu kuphela angcono kakhulu. Mina ngokwami ​​ngasebenzisa okukhethwa kukho okulandelayo ukuze ngisebenzise amathuba edayisi e-Amazon - i-Jungle Scout, i-AMZ Tracker, ne-Scope - ngayinye yazo inekhono lokufakaza, ngakho-ke ake sibe nombono ofushane nje ngezansi - utilizza wordpress download.
Ithuluzi lokuqala lokusesha ama-Amazon top solutions solutions is Jungle Scout. Ngincoma ukuthi ngizame ngaphambi kwanoma yini enye ukuqonda ngokushesha ukuthi yimiphi imikhiqizo efunwa kakhulu ku-Amazon, futhi yiziphi izicucu manje ezithandwayo kubathengisi ngaphesheya. Eqinisweni, i-Jungle Scout ibonwa ngabathengisi abaningi abaphumelelayo e-Amazon njengethuluzi elihle kakhulu lo "cwaningo olwenziwe ngemininingwane" lomkhiqizo. Le nketho ikhuluma ngokwayo, okwenza kube nakanjani ukuthi kufanele usebenzise noma okungenani ube nokuzama kwakho kokuqala. Nazi ezinye izinzuzo eziyisisekelo eziza nale thuluzi le-intanethi: Idatha ebanzi yamamethrikhi angukhiye ephelele (kokubili owakho, nabaphikisana nabo), isiza ekutholeni amathuba afihlekile kanye nemifudlana engenayo yokuncintisana, niche hunter ukukunika inzuzo ngaphansi komncintiswano wangempela we-cutthroat, futhi izici ezihlukile kakhulu ezidingekayo ukuze zifinyelele ngempumelelo emakethe entsha.
Leli thuluzi libonisa izinhlangothi zalo eziqine kakhulu lapho udinga ukucinga amagama angukhiye we-Amazon, asetshenziselwa ukufakwa ohlwini komkhiqizo ophumelele kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, leli thuluzi elihlosiwe lokucwaninga ngegama elingukhiye lingakusiza ngokuqonda okubaluleke nakakhulu mayelana nemiphumela yokucinga yangempela kanye nezicelo zegama elingukhiye elide elisetshenziselwa abathengi abakhuthele ku-Amazon njalo. Ukwengeza, i-AMZ tracker ine-SEO isici sokubonisa ukuthi yini engenziwa ngokuhlelwa kokufakwa komkhiqizo wakho kwemiphumela esiphezulu.
Njengeyithuluzi legama eliyinhloko langaphambilini, Ububanzi buhlanganisa ukucwaninga ngegama elingukhiye ngokuhlaziywa komkhiqizo okuncintisana. Phakathi kwezinye izici, lo msizi we-intanethi ukhulu kakhulu uma kuziwa emkhankasweni wokwenza umkhankaso we-PPC, usesho amathuba amasha we-niche, kanye nokuphathwa okusemngeni okusebenzayo ngokulinganisela kwedatha okuzungezile okudingekayo ukubona isithombe esikhulu sezindleko zakho zokuthengisa nezindleko ze-FBA . Ngincoma ukusebenzisa leli thuluzi ukudonsa ndawonye okutholakele okuhle kwezimakethe zakho zemakethe - ukuguqula isu lakho lokuthengisa elisebenza ngempela.